Inqubomgomo Yemfihlo | I-Narrowtex
Uyemukelwa ku-https: //www.narrowtex.co.za (“Isiza”). Siyaqonda ukuthi ubumfihlo ku-inthanethi bubalulekile kubasebenzisi beSayithi lethu, ikakhulukazi lapho kwenziwa ibhizinisi. Lesi sitatimende silawula izinqubomgomo zethu zobumfihlo maqondana nalabo basebenzisi beSayithi ("Izivakashi") abavakashela ngaphandle kokwenza ibhizinisi kanye nezivakashi ezibhalisela ukwenza ibhizinisi eSizeni futhi zisebenzisa izinsizakalo ezahlukahlukene ezinikezwa yiNarrowtex Pty Ltd (ngokuhlanganyela, " Izinsizakalo ”) (“ Amakhasimende Agunyaziwe ”).
Imininingwane Eyaziwa Ngomuntu
kubhekisa kunoma imiphi imininingwane ekhomba noma engasetshenziselwa ukukhomba, ukuxhumana, noma ukuthola umuntu lowo lolo lwazi lufaka kuye, kepha kungagcini lapho, igama, inombolo yocingo, inombolo yefekisi, ikheli le-imeyili, amaphrofayli ezezimali, ukuphepha komphakathi inombolo, nemininingwane yekhadi lesikweletu. Imininingwane Engaqondakali Yakho ayifaki imininingwane eqoqwa ngokungaziwa (okungukuthi, ngaphandle kokukhonjwa komsebenzisi ngamunye) noma imininingwane ye-demographic engaxhunyiwe kumuntu okhonjwa.
Ulwazi Luni Olutholakala Ngomuntu oluqoqiwe?
Singaqoqa imininingwane eyisisekelo yemininingwane yabasebenzisi evela kubo bonke abavakashi bethu. Siqoqa imininingwane elandelayo eyengeziwe evela kubathengi bethu abagunyaziwe: amagama, amakheli, izinombolo zocingo namakheli e-imeyili wabathengi abagunyaziwe, uhlobo nosayizi webhizinisi, kanye nobungako nosayizi wempahla yokukhangisa iKhasimende eligunyaziwe okuhlose ukuyithenga noma ukuyenza thengisa.
Yiziphi izinhlangano eziqoqa ulwazi?
Ngokungeziwe ekuqoqweni kwethu kwemininingwane, abathengisi bethu benkampani yangaphandle (njengezinkampani zamakhadi wesikweletu, izindlu ezisusa imigwaqo kanye namabhange) abangahlinzeka ngezinsizakalo ezinjengokuthenga ngesikweletu, umshwalense, nezinsizakalo ze-escrow bangaqoqa lolu lwazi kubavakashi Bethu nabahlinzeki abagunyaziwe. Asilawuli ukuthi laba bantu besithathu balusebenzisa kanjani lolo lwazi, kepha siyabacela ukuthi badalule ukuthi basebenzisa kanjani imininingwane yabantu abanikezwe yona kubavakashi nabaKhasimende abagunyaziwe. Amanye ala maqembu wesithathu angaba ngabalamuli abasebenza kuphela njengezixhumanisi kwistende lokuhambisa, futhi bangagcini, balondoloze, noma basebenzise imininingwane abanikezwe yona.
I-Site isebenzisa kanjani Ulwazi Lomuntu Ngolwazi?
Sisebenzisa imininingwane eqondakalayo yomuntu siqu ukwenza isiza ngokwezifiso, ukunikela ngezinsizakalo ezifanele, kanye nokwenza imisebenzi yokuthenga nokuthengisa kusayithi. Singathumela i-imeyili Abavakashi kanye Namakhasimende Agunyaziwe mayelana nocwaningo noma ukuthenga nokuthengisa amathuba eSayithi noma imininingwane ehlobene nodaba lweSayithi. Futhi singasebenzisa ulwazi oluhlonza umuntu ukuthinta abavakashi kanye namakhasimende agunyaziwe ukuphendula imibuzo ethile, noma ukunikeza imininingwane eceliwe.
Ngabe ulwazi lungabelwa nobani?
Imininingwane Engakhonjwa Ngamuntu Ngamakhasimende Agunyaziwe ingabiwa namanye Amakhasimende Agunyaziwe afisa ukuhlola ukuthengiselana okungaba khona namanye Amakhasimende Agunyaziwe. Singabelana ngolwazi oluhlanganisiwe olumayelana nabavakashi bethu, kufaka phakathi inani lezivakashi zethu namakhasimende agunyaziwe, nabasebenzeli bethu abasebenzisana nabo kanye nabathengisi bezinkampani zangaphandle. Siphinde sinikeze ithuba lokuthi “siphume” ekutholeni ulwazi noma ukuthintwa yithi noma yinoma iyiphi i-ejensi esisebenzele.
Lugcinwa kanjani ulwazi lomuntu siqu?
Imininingwane engakhonjwa eqoqwe yiNarrowtex Pty Ltd igcinwe ngokuvikelekile futhi ayifinyeleleki kubantu besithathu noma kubasebenzi bakwaNarrowtex Pty Ltd ngaphandle kokusetshenziswa njengoba kukhonjisiwe ngenhla.
Yikuphi ukukhetha okutholakala kubavakashi mayelana nokuqoqwa, ukusetshenziswa nokusabalalisa kolwazi?
Izivakashi namakhasimende agunyaziwe angakhetha ukuphuma ekutholeni imininingwane engacelwanga noma yokuthintwa yithi kanye / noma abathengisi bethu kanye nama-ejensi ahlangene ngokuphendula kuma-imeyili njengokuyalelwa, noma ngokuxhumana nathi ku
Ingabe Amakhukhi Asetshenziswa Esizeni?
Amakhukhi asetshenziselwa izizathu ezahlukahlukene. Sisebenzisa amakhukhi ukuthola imininingwane ngokuthandwa ngabavakashi bethu nezinsizakalo abazikhethayo. Sisebenzisa futhi amakhukhi ngezinjongo zokuphepha ukuvikela Amakhasimende ethu Agunyaziwe. Isibonelo, uma iKlayenti eliGunyaziwe lingene ngemvume futhi isiza sisetshenziswe isikhathi esingaphezu kwemizuzu ye-10, sizovala ngokuzenzakalelayo iKhasimende Eligunyaziwe.
Ngabe iNarrowtex Pty Ltd ilusebenzisa kanjani ulwazi lokungena ngemvume?
INarrowtex Pty Ltd isebenzisa imininingwane yokungena, kufaka phakathi, kepha kungagcini lapho, amakheli e-IP, ama-ISP, nezinhlobo zesiphequluli, ukuhlaziya izitayela, ukuphatha iSayithi, ukulandelela ukuhamba komsebenzisi nokusetshenziswa kwakhe, nokuqoqa imininingwane ebanzi yabantu.
Iziphi abalingani noma abahlinzeki bezinsizakalo abanokuthola ulwazi olubonakalayo ngabanye abavakashele kanye / noma Amakhasimende Agunyaziwe Esizeni?
I-Narrowtex Pty Ltd ingene futhi izoqhubeka nokusebenzisana kanye nezinye izinhlangano nabathengisi abaningi.Abathengisi abanjalo bangafinyelela kwimininingwane ethile engakhonjwa uqobo ngesidingo sokwazi isisekelo sokuhlola Amakhasimende Agunyaziwe ukuthi afanelekile yini ukuthola insiza. Inqubomgomo yethu yobumfihlo ayihlanganisi ukuqoqwa kwabo noma ukusetshenziswa kwalolu lwazi. Ukudalulwa Kwemininingwane Engakhonjwa yomuntu siqu ukuhambisana nomthetho. Sizodalula imininingwane ekhomba umuntu uqobo ukuze sithobele umyalo wenkantolo noma ukubizelwa enkantolo noma isicelo esivela kwabomthetho sokukhipha imininingwane. Sizodalula nemininingwane engakhonjwa uma kunesidingo ukuvikela ukuphepha kwabavakashi bethu namakhasimende agunyaziwe.
IsiSayithi sigcina kanjani Ulwazi Lolwazi Olubonakalayo oluvikelekile?
Bonke abasebenzi bethu bayazi inqubomgomo yethu yezokuphepha kanye nokwenza. Imininingwane Engaqondakali Yabantu Abavakashi Bethu kanye Namakhasimende Agunyaziwe itholakala kuphela kwinani elilinganiselwe labasebenzi abaqeqeshiwe abanikezwa iphasiwedi ukuze bakwazi ukufinyelela kulolo lwazi. Sihlola amasistimu wethu wokuphepha nezinqubo njalo. Imininingwane ebucayi, enjengezinombolo zamakhadi wesikweletu noma izinombolo zokuphepha komphakathi, ivikelwe yizinkambiso zokubethela, endaweni ukuvikela imininingwane ethunyelwe nge-Intanethi. Ngenkathi sithatha izinyathelo ezinengqondo zokuthengisa isiza esivikelekile, ezokuxhumana nge-elekthronikhi kanye nemininingwane yolwazi zingaphansi kwamaphutha, ukuphazamisa futhi kuqhekeza, futhi asikwazi ukuqinisekisa noma ukugunyaza lezo izehlakalo ngeke zenzeke futhi ngeke sibe nesikweletu kubavakashi noma abagunyaziwe Amakhasimende nganoma yikuphi kwenzeke okunjalo.
Abavakashi bangalungisa kanjani noma yikuphi ukungalungi kolwazi olwaziwa ngabanye?
Izivakashi kanye namakhasimende agunyaziwe angaxhumana nathi ukuvuselela imininingwane engakhonjwa ngabo noma ukulungisa noma yikuphi ukunganembi ngokusithumela i-imeyili ku mhlaka@narrowtex.co.za
Isivakashi singasusa noma sikhiphe Ulwazi oluKhe lwabantu oluqoqwe yiSayithi?
Sinikeza izivakashi namakhasimende agunyaziwe indlela yokususa / yokuvula imininingwane engakhonjwa yomuntu siqu kusuka kusizindalwazi seSayithi ngokuxhumana. Kodwa-ke, ngenxa yezipele namarekhodi okususwa, kungahle kungenzeki ukusula okufakwe yisihambeli ngaphandle kokugcina imininingwane esalile. Umuntu ocela ukuthi kusebenze imininingwane engakhonjwa uqobo luzosuswa lolu lwazi lusebenze, futhi ngeke sithengise, sidlulise, noma sisebenzise imininingwane ekhomba umuntu uqobo ephathelene nalowo muntu nganoma iyiphi indlela eya phambili.
Kwenzekani uma Izinguquko Zenqubomgomo Yobumfihlo?
Sizovumela abavakashi bethu nabathengi abagunyaziwe ukuthi bazi mayelana nezinguquko kumgomo wethu wobumfihlo ngokuthumela izinguquko ezinjalo kwiSayithi. Kodwa-ke, uma sishintsha inqubomgomo yethu yobumfihlo ngendlela engase ibangele ukudalulwa kolwazi olubonakalayo lomuntu ukuthi uMvakashele noma iKhasimende eligunyaziwe ngaphambilini ucele ukuthi ingadalulwa, sizoxhumana noMvakashele noma iKhasimende eligunyaziwe ukuvumela uMvakashi noma uMthengi ogunyaziwe ukuba avimbele ukudalulwa okunjalo.